Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwayo ngegama "Ngobudlova“. I-Tyrone Mings Childhood Indaba Yethu Indaba ye-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
The Life and Rise of Tyrone Mings. Isikweletu Sezithombe: I-DailyMail, iTV, I-TbrFootball futhi isoka
Yebo, abalandeli abaningi bamazi ngesikhathi esakudlala eNgilandi, umdlalo wokuqala okwakukhonjiswa ngawo izingoma zokucwaswa kwabalandeli beBulgaria. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Tyrone Mings biography ethakazelisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
UTyrone Deon Mings wazalwa ngosuku lwe-13th ngoMashi 1993 kunina, uDawn Johnson nobaba, u-Adrian AKA Adie Mings edolobheni laseBat, e-United Kingdom. Wazalwa njengendodana okuwukuphela kwayo emadodaneni amathathu iya kubazali bayo abathandekayo abanezizinda ezihlukile zezizwe.
Hlangana Nabazali be-Tyrone Mings - UDawn Johnson no-Adie Mings. Isikweletu Sezithombe: Twitter
UTyrone Mings unomndeni wakhe kusuka eBarbados ngokusebenzisa uhlangothi lukayise. Njengoba kubonwe ngezansi, leli yisiqhingi esisendaweni yaseCaribbean eNyakatho Melika. Uthi bewazi?… Indawo yokuzalwa komculi odumile Rihanna. Njenge koloni likashukela elinothile, izwe laba yisikhungo sesiNgisi sokuhweba ngezigqila sase-Afrika ezungeze i-1807. Lokhu kusho ukuthi cishe bonke abamnyama abahlala eBarbados kufaka ogogo bakaTirone Mings banezimpande zase-Afrika.
Imvelaphi yomndeni kaTrone Mings ichaze. Isikweletu Sezithombe: I-WorldAtlas
UTyron Mings wayenempilo yokuqala esemncane ngenkathi ekhula eceleni komama wakhe nodadewabo abathathu. Ngesikhathi esengumfana omncane, wabona ubudlelwano obumfushane phakathi kukamama wakhe nobaba njengoba behlukana, okwathi ngemuva kwalokho umama wakhe wamthatha yena nodadewabo. Ekuqaleni, baqhubeka bahlala nomngani wakhe osondelene naye eChippenham (Idolobha laseNgilandi) njengoba yayingekho enye indlela. Ngelinye ilanga, bobabili uMings, umama wakhe kanye nodadewabo ngenxa yokuphazamiseka ababekubangela, banquma ukuyishiya le ndawo, benganayo enye indawo abangaya kuyo futhi bengenamali yokuthola omunye ikhaya.
Ngenkathi echaza ngemvelaphi yakhe emndenini nokukhuliswa kwakhe ku Telegraph, uthe impilo iguqulwe sibheke phansi lapho sebephinde babhekana nenye into ngaphandle kokuhlala endaweni yokuhlala engenakhaya. Ngesikhathi besendaweni yokukhosela, uMings, umama wakhe uDawn nodadewabo abathathu bonke babelana ngemibhede emibili engasasebenzi.
Ngesikhathi sokuphila kwakhe esemncane, uTyrone Mings, omama bakhe kanye nodadewabo bonke babehlala endaweni yokuhlala engenakhaya. Isikweletu: I-VoiceofOC kanye I-Daily Mail
Akuwona wonke umuntu endaweni yokukhosela wayebahle kubo. Bobabili umama, indodana namadodakazi baphila impilo ebuhlungu njengoba cishe yonke into yabiwa esidlangalaleni ibize…; indawo yokuwasha, izindlu zangasese, izihlambi zomphakathi, njll.
Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngenkathi ehlala endaweni yokuhlala engenamakhaya, uMings wezwa isidingo sokuya esikoleni ukuze enze okuthile empilweni yakhe. Kude nesikole, ibhola laba yinsindiso yakhe futhi okuwukuphela komthombo wenduduzo kude namaqiniso ahluphekayo.
ITrone Mings Education ihlanganiswe nebhola. Isikweletu ku-HPR nakuDailyMail.
Ukuba ngcono kunabo bonke abanye abantwana kulo mdlalo, uTyrone Mings wayazi ukuthi unethalente futhi angenza okuthile empilweni yakhe ngebhola. Uma ucabanga ngobunzima ahlangabezana nabo ngaleso sikhathi, konke ayekufuna ukusebenzisa ibhola ukukhulisa isizinda somndeni wakhe ompofu.
Ukuze afinyelele isiqalo esihle somsebenzi, waqala ukuzifaka kaningi emigodini yebhola lendawo, efunda ukuhweba kwakhe ngebhola njengomvikeli onzima nokwehlisa isithunzi. Emuva ngaleso sikhathi ngenkathi edlala ibhola, izibukeli ezazazi izindaba zomndeni wakwaTyrone Mings nendawo yokuhlala engenamuntu zambonisa inhlonipho ethile + isikhuthazo njengoba bengakaze bangabaze ukuthi wayehamba ngendlela eyiyo.
Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ukuziqhenya kukanina nodadewabo kwakungekho mngcele ngenkathi inhlanhla iMings ngokusebenza kanzima nangokuzenzisa ibizelwa ukuhambela izivivinyo zebhola neSouthampton academy. Eminyakeni eyisishiyagalombili (unyaka we-2001), uMings wabhaliswa esikhungweni semfundo ephakeme ngemuva kokudlula kwezivivinyo ezinemibala endizayo.
I-Tyrone Mings Life Life yaseBhola- Izinsuku zakhe eSouthampton Academy. Isikweletu Sezithombe: I-DailyMail
Lapho ejoyina, bekumnandi kumvikeli osemncane. Kepha uTyrone Mings osemusha kwakudingeka azidele kakhulu ukuze akhule ngezigaba zezifundo. Ukuba sesinye sezifundo ezinhle kakhulu eNgilandi, okuye kwaletha amathalente asezingeni lomhlaba- ukuthandwa kuka-Alan Shearer, uGareth Bale njalonjalo, kube nomncintiswano omkhulu wezindawo futhi nokusatshiswa kokukhishwa.
U-2009 unyaka wawungunyaka odabukisa kunabo bonke emndenini wakwaTyrone Mings. Umvikeli othembisayo ukhishwe yiSaints e2009 (eneminyaka eyi-15) ngesikhathi isikhungo sezemfundo sithi kungenxa yokuqedwa kwesabelomali sentsha.
I-Tyrone Mings yehlelwe hhayi kuphela ngenxa yalokho okubizwa ngokuthi 'ukusikwa kwesabelomali'kodwa futhi ngoba iklabhu immangalele ngokuthi unesikhumba esinsundu noma ongasindi. Babengazi ukuthi benza iphutha elikhulu lokukhulula i-6 ubude i-5 inches (Ukuphakama kweTrisone Mings) uzimele we-hulking futhi ongumdlali wekusasa wase-England.
Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo Wokudumisa
Noma yimuphi umdlali webhola owakhuliswa emndenini ompofu futhi oye waphila ngokwenqatshwa yisikhungo sebhola uzokwazi kahle kakhulu izinhlungu ezijulile ezingokomzwelo nemiphumela emibi ngokomqondo engaba nayo. Ngokuthembela okuncane noma okungatheni ngalo mdlalo, uTyrone Mills ompofu wanquma ukuyeka ibhola ngesikhathi eyi-15. Kudabukisa kakhulu!!
UTyrone Mings uqhubekile nokuyofuna umsebenzi eChippenham, idolobhana elikhulu elinomlando enyakatho nentshonalanga yeWiltshire, e-England. Umsebenzi wakhe wokuqala kwakuyi-pub (indawo yokuphumula yomphakathi) lapho adonsa khona ama-pints (wakhonza ubhiya) ngomholo we- £ 45-ngeviki. Efuna ukufaka imali yakhe ukuze akhokhe izikweletu, uTyrone uthathe isinqumo sokuyofuna umsebenzi kwenye indawo.
I-White Hart Pub eChippenham lapho iMings yadonsa khona amapayipi. Isikweletu Sezithombe: Ama-EuroSports futhi Ilanga
UMings ekugcineni uthole umsebenzi wokweluleka ngempahla ebanjiswayo (umeluleki wempahla ebanjiswayo), umsebenzi omuhle ngokwanele ukukhokha izikweletu zakhe. Ngenkathi esebenza, waya e-Millfield School eSomerset iminyaka emibili. Isikole ngemuva kokuzwa izindaba zokumenwa kwakhe okwenhliziyo yakhe yayinomusa wokumnikeza isifundi sebhola, into eyenziwe uMings yabuyisela ingqondo yakhe ebuyela ebholeni.
Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuvuka Kodumo
Ngemuva kokushiya isikole, izifundo zeMings zamenza wangena ehlangothini lweYate Town olungeyona iligi eGloucestershire. Lapho, umfana ompofu waqala ukulwa nendlela yakhe eya phezulu. Ehlobo le-2012, wakhuphuka njengoba amukela iqembu lakhe lasekhaya iChippenham Town. Le kilabhu imnikeze ithuba lokuhambela izivivinyo eziningana kwenye indawo njengoba ebekhiphe iqembu libonga ngezimpawu zakhe.
UTyrone Mings wanikezwa umfundaze webhola owamsiza ukuthi abuyele ebholeni. Isikweletu Sezithombe: Ilanga
Ngemuva kwezilingo ezihlulekile eCardiff City, Swindon Town, Portsmouth naseBristol Rovers, ama-Mings onomoya ongakaze asho lutho afinyelela ukunaka kwalowo owayengumvikeli we-Ipswich uRussel Osman othathe isinqumo sokumsiza. Njengoba inhlanhla ibingaba nayo, u-Osman uphakamise uMings kumphathi we-Ipswich Town uMick McCarthy ommemele ukuthi avele enkantolo.
Esikhundleni sokukhubazeka edolobheni le-Ipswich, isivikeli esinciphayo sakhula kusuka emandleni saya emandleni, sisuka eduze kwe-zero saya kwiqhawe elingathandabuzekiyo futhi sibuyisela umphathi wakhe (umsizi wesiphetho) ngokubonisa kwakhe okuhle.
UTyrone Mings wakhula emandleni emandla ukuhlaba umxhwele umphathi wakhe. Isikweletu Sezithombe: Ilanga
Ukuqala kokuphumelela kwakhe kwenzeka lapho efaka khona ama-Championship Player of the Month awards ngesizini ye-2014 / 2015. Lokhu kwaheha amaklabhu wePremier League acele ukuba avume ukusayinwa kwakhe.
Ku-26 Juni 2015, iMings isayine i-AFC Bournemouth. Ukuze ugweme ukuncintisana ngezindawo, wamukele ukuthunyelwa kwemali mboleko e-Aston Villa. Lesi sinqumo saba yinguquko enkulu emsebenzini wakhe. E-villa, umvikeli omkhulu we-6-foot-5 wakhuthazela ukukhuphuka kwesimo sezulu okuphakeme. Waba ngomunye wezinkanyezi amadoda usize i-villa ekuzuzeni umdlalo wamanqamu we-2019 EFL Championship.
UTyrone Mings waba yintandokazi yabalandeli njengoba asiza iVilla kuvikela ama-Championship we-EFL ka-2019. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter
Ngemuva kokusiza i-Aston Villa ekukhushulweni, ama-Mings aba yintandokazi yabalandeli abaqinile. Akubanga sikhathi, waba enye yezindawo ezishisa kakhulu zokuzivikela eNgilandi. Ukunyuka okunjalo kwamtholela indawo eqenjini lesizwe lase-England. Kwamtholela neqembu lesizwe laseNgilandi lelo elalimbozwe yizimbo zokucwasa ngokwebala ezivela kubalandeli beBulgaria.
Bheka, umfana omncane owayekade ehlala indawo yokuhlala engenamakhaya, manje useqhakaza phambi kwamehlo abalandeli bebhola. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokukhuphuka kwakhe udumo nokwenza i-England yakhe idlalwe, kuyacaca ukuthi abalandeli abaningi bebhola kumele babuze ukuthi ngabe intombi kaTyrone Mings ingaba ngobani. Akunakuphikwa ukuthi udumo lwakhe, ukubukeka okuhle okuhambisana nalokho ukuphakama kwe-6 ft 5 bekungeke kumenze angathandeki kwabesifazane.
Ngubani uTirone Mings Girlfriend
Kodwa-ke, ngemuva kwesidlali sebhola esiphumelele, kukhona intombi ebukhazikhazi okwaziwa kakhulu ngayo. Iqiniso liwukuthi - Ngesikhathi sokubhala, izinganekwane ezifihliwe zikaTyrone Mings ngenye yezindlela ezibalekela ukucwaswa kwamehlo omphakathi ngoba impilo yakhe yothando iyimfihlo kakhulu futhi kungenzeka ayinadrama.
Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi uTyrone Mings Impilo yomuntu siqu kude nemisebenzi yakhe enkundleni kungakusiza uthole isithombe esingcono sobuntu bakhe.
Ukuqala phansi, uMings ungumuntu onamandla futhi onengqondo futhi uvame ukuphupha ekufuneni kwakhe ubukhulu. Kude nebhola, uvame ukuchitha isikhathi esiningi ejimini ukuze akhe imisipha yakhe nomzimba onzima. Ngaphandle kwebhola, uMings uzibona engusomabhizinisi. Uthi bewazi?… Unenkampani eyakha ingaphakathi eBournemouth.
Ukuqonda ubuntu be-Tyrone Mings ku-pitch. Isikweletu ku-IG
Futhi kuTyron Mings Life Life, ungumuntu onganakekeli kakhulu futhi othanda ukusiza abanye ngaphandle kwethemba lokuthi uzobuya nokuthile. Ngenkathi iningi labantu lijabulela usuku lukaKhisimusi nemindeni yabo. UTyrone Mings nentombi yakhe banika isikhathi sabo kwabanenhlanhla encane ezindaweni zokuhlala ezingenamakhaya, bakhipha ukudla nezinto eziyigugu.
I-Tyrone Mings ibuyisa ubuhle ngokuvakashela nokusiza abantu abahlala endaweni yokuhlala engenakhaya. Isikweletu: Inkswich inkanyezi
Ngaphandle kokungabaza, iTrone Mings Impilo yomuntu siqu ibonakala ngozwela futhi iveze amandla emizwa.
Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Indaba yomndeni kaTyrone Mings ifundise abantu abaningi abahluphekayo, kepha efisa ukuzuza ubukhulu ukuthi 'indlela enhle yokungazizwa ungenathemba ukuthi uvuke wenze okuthile'. Njengasikhathi sokubhala, uTyron Mings usungule owakhe umndeni wakuleli obheke kwinkululeko yezimali, konke kubonga ebholeni. Manje, ake sikunikeze ukuqonda okwengeziwe kumalungu omndeni wakhe.
Ukwazi okwengeziwe ngeTrone Mings Father: Ibhola emndenini alikaze liqale ngeTyrone. Uthi bewazi?… Ubaba wakhe u-Adie Mings wayengumgadli owake wadlala neBat City neFloucester City. Inhliziyo exolelwe kaTyron Mings isize ukuhlanganisa bobabili ubaba nendodana. Uthi bewazi?… Bobabili ubaba nendodana basasebenza kolayini ofanayo wokuhweba. U-Adie Mings njengasesikhathini sokubhala usebenza njenge-scout ye-Chelsea Football Club.
I-Tyrone Mings inokwenzeka noyise- u-Adie Mings. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram
Ukwazi okuningi mayelana noMama kaTyron Mings: UDawn Johnson bagan wathwala igama likayise ngemuva kokuhlukana nomyeni wakhe eminyakeni embalwa ngemuva kokuhlangana. UDawn, umama oqinile akayitsheli iNdodana yakhe, ukuthi ihlale ibuthakathaka ukuze izimpisi zobunzima zingayithola. Esikhundleni salokho, wamqinisa futhi wamsekela kuyo yonke imigomo yakhe yobukhulu. U-Dawn omuhle nendodana yakhe ngesikhathi sokubhala, manje sebejabulela impilo enhle kakhulu.
UTyrone Mings uphuma noMama wakhe uDawn Johnson
Ukwazi okuningi ngeTrisone Mings Siblings: Odadewethu abangama-mings ngabakwaCherrelle Mings, u-Iesha Mings nomunye omncane okwaziwayo ngaye. Ekwazisa odadewabo, njengoba bebemi ngakuye kuzo zonke izikhathi zakhe ezinzima, uMings wake washo emazwini akhe “Angikaze ngidinge ngempela abangane abakhula bonke ngenxa yokuthi nginodadewethu“. Njengasikhathi sokubhala, omunye udadewabo ogama lakhe linguCherrelle Mings manje obizwa ngegama (uCherrelle Baram) ushadile.
UTyrone Mings kungenzeka nodadewabo abathandekayo- uCherrelle (kwesobunxele) noLesha (kwesokudla) abathathe ngemuva kokubukeka kukanina .. Isikweletu: IG
Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Ukwazi i-Tyrone Mings L Indlelayle kuzokusiza uthole isithombe esiphelele sempilo yakhe. Ukuqala phansi, ngisho nokwenza imali eningi kungububi obudingekayo, uTyrone Mings akaziboni ephila impilo exotic ebonakala kalula ngezimoto ezinomdlandla nezindawo ezihlala kuzo. Ishayela imoto eyisibhakela esivamile, uphawu olubonisa indlela yokuphila ethobekile.
I-Tyrone Mings ishayela i-average average player's Soccer's's. Isikweletu Sezithombe: IG
I-Tyrone Mings yenza imali eyanele ayifaka ebhizinisini lakhe, ayisebenzisela ukusiza futhi okubaluleke kakhulu, ayisebenzisela ukuphila impilo emnandi olwandle oludumile okuyindawo ayithandayo ngamaholide. Ngezansi kunesithombe se-Mings kunokwenzeka ngenkathi ejabulela ukugibela isikebhe sakhe.
Indlela Yokuphila kaTyrone Mings- Uthanda ukuchitha imali yakhe olwandle ejabulela ukugibela isikebhe. Isikweletu Sezithombe: IG
Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Wake wahlawulela uFans owathenga ihembe lakhe elidala: Wake waba khona e2014, uTyrone Mings washintsha inombolo yakhe yehembe esuka kuNo15 wayiswa kuNo3 kulandela ukudluliselwa kuka-Aaron Cresswell eWest Ham United. Lesi senzo size ngemuva kwesikhathi ngemuva kokuba amajezi akhe eNo15 esevele ethengiwe ngabanye abalandeli bakhe. Uthi bewazi?… UMings wayephana kangangokuba wanikela ngokuthenga amahembe amasha abalandeli ababethenge amahembe ngama-15 akhe amadala aphrintiwe ngemuva.
UTyrone Mings- uncome kakhulu isenzo esikhulu ngemuva kokuthembisa ukuthi uzothenga amahembe amasha abalandeli ababenenombolo yakhe endala yeqembu. Isikweletu Sezithombe- BBC nge-GLENN PARKER / TOM PULLEN.
Wake wafaka isitembu ekhanda likaZlatan Ibrahimovic: Tyrone UMings wake wenza okungacabangi- okusolwa ukuthi wagxaza ekhanda likaZlatan Ibrahimovic, isenzo esambona evinjelwa imidlalo emihlanu. Ngoba 'Zlatan", UZlatan akazange azizwe zibuhlungu futhi igeyimu yaqhubeka nokuziphindiselela engqondweni yakhe.
UTyrone Mings wake wagxiviza ekhanda likaZlatan Ibrahimovics. Isikweletu: Ilanga
Ngemuva kwemizuzu embalwa kulo mdlalo, uZlatan Ibrahimovic uthathe ithuba lokuziphindisela kuMings. Ngalesi sikhathi, ilungelo laseSweden lamshiya ngesikhathi sokukhishwa ekhoneni lapho athi wayenguMings owangena ngenhlanhla esinqeni sakhe.
I-Tyrone Mings neZlatan Ibrahimovic Feud. Isikweletu Sezithombe: TheGuardian
Naphezu komshudo, kwakunguTyrone Mings owathola ukuvinjelwa okude. Lokhu kungenxa yokuthi isitembu sithathwa njengecala elibi le-English FA. Ngezansi kwesiqeshana sobufakazi bevidiyo bokuthi uMings wanyathela ngengozi ekhanda lika-Ibrahimovic.
Amaqiniso we-Tyrone Mings: I-Tyrone Mings ' umzimba ubona umzimba wakhe njengotshani wakhe. Unama-tattoos enziwe ngomklamo wakhe okhethekile obonisa izimpawu 'zeso, newashi nezomntwana' ezinamamaki wesipiliyoni sakhe ngenkathi esemncane.
I-Tyrone Mings tattoo. Isikweletu Sezithombe: JasonPixs ne-Instagram
I-Tyrone Mings Football Academy: UTyrone Mings une-football academy ebizwa ngokuthi “I-Tyrone Mings Academy”Esizinze eBirmingham, eNgilandi. Isikhungo semfundo samukela izingane (abesilisa nabesilisa) abaphakathi kweminyaka ye-6 ne-16. Ukuba nesikhungo semfundo ephakeme kuyindlela yakhe yokubuyisela emphakathini ngokuhweba kwakhe.
I-Tyrone Mings Academy. Isikweletu Sezithombe: TMA
Ama-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Isifinyezo sevidiyo
Thola ngezansi Isifinyezo sevidiyo yethu ye-YouTube yale phrofayili. Ngomusa Vakashela futhi ubhalise kuya kwethu Isiteshi se-Youtube. Futhi, chofoza okubhalisile kwe-Bell Icon Yezaziso.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda kwethu I-Tyrone Mings Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Theo Walcott Ingane Yendaba Yomlando Plus Untold Biography Facts
UDominic Solanke Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
UHarry Maguire Incwadi Yengane Yabantwana Plus Untold Biography Facts